.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: စာမျက်နှာမှာသီချင်းရှာနည်း
ဒီနေ့တော့ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် စာမျက်နှာမှာမိမိ လိုချင်သောသီချင်းရှိ မရှိရှာနည်းလေးရေးတင်လိုက်ပါတယ်။
အဲစာမျက်နှာကိုရောက်ရင် ကီးဘုတ်က ctrl key နဲ့fkey ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါ။
အဲဒါဆိုရင် browser ရဲ့အောက်ခြေမှာ boxလေးတက်လာပါလိမ့်မယ်။
find ရဲ့ဘေးမှာစာရိုက်တဲ့အကွက်လေးရှိပါတယ်။ အဲအကွက်မှာမိမိ နားဆင်ချင်တဲ့သီချင်းနာမည်ကိုရိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါ။
Posted by FlashSongCrazy at 01:59